होसियार: बच्चाको मस्तिष्क विकासमा यसरी बर्बादी ल्याउदैछ स्मार्टफोन — Sanchar Kendra
१जसपाले सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो
२राष्ट्रपतिसमक्ष भारतीय राजदूतले पेश गरे ओहोदाको प्रमाणपत्र, आजै प्रधानमन्त्रीसँग भेट
३अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु
४एसपीपी विवादका बीच प्रधानसेनापति अमेरिकामा : डिफेन्स युनिभर्सिटी भ्रमणपछि पेन्टागनमा भेटवार्ता
५सरकार परिवर्तनसँग जोडेर आएका प्रश्नहरुको निरुपण गठबन्धनको बैठकबाट हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
६भारतीय फोटोग्राफरलाई एक वर्ष कैद गर्ने झापा जिल्ला अदालतको फैसला
७अखिल क्रान्तिकारीकाे भेलाद्वारा संघर्षमा जाने निर्णय, को-को छन पहिलो निसानामा ?
८किसानहरूले लगाए कृषि मन्त्रालयमा ताला
९सरकारले अमेरिकालाई लेखेको पत्रबारे जनताले थाहा पाउनुपर्छ : भीम रावल
१०खोलामा बगेर बालक बेपत्ता
११घाटमा जलाउँदै गरेको किशोरीको शव प्रहरी नियन्त्रणमा, दिदी, आमा र ठूलीआमा पक्राउ
१२जसपाले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक
७आठ वर्षको जात्रामय यात्रा !
८स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला वली पक्राउ
९काठमाडौँमा मध्यराति भूकम्पको धक्का
१०नबिल बैंकले आफ्ना शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिने
११नेकपा (बहुमत)द्वारा वार्ता टोली पुनर्गठन, देउवा सरकारलाई गरायो जानकारी
१२ललितपुरमा ट्राफिक प्रहरीको ज्यादती, बाटोमा हिँडिरहेका डाक्टरमाथि गर्यो कुटपिट
जीवनशैली यौन स्वास्थ्य
होसियार: बच्चाको मस्तिष्क विकासमा यसरी बर्बादी ल्याउदैछ स्मार्टफोन
अहिले बच्चाका लागि खेलौना जस्तै भएको छ स्मार्टफोन । आमाबुवा व्यस्त छन् । बालबच्चासँग हाँस्ने, खेल्ने समय छैन । कतिपय आमाबुवा बच्चासँग समय बिताउन अल्छी मान्छन्, झर्को मान्छन् । बच्चालाई भुलाउन, खुसी बनाउन, खेलाउनका लागि स्मार्टफोन दिने गर्छन् ।
स्मार्टफोन पाएपछि बच्चा खुसी हुन्छन् ।
बच्चालाई खुसी राख्न पनि आमाबुवाले स्मार्टफोनको साहारा लिने गरेका छन् । जब बच्चाले खाना खान अरुची गर्छन्, स्मार्टफोनको लोभ देखाएर खाना ख्वाइन्छ । जब बच्चाले कुनै काम गर्न जाँगर चलाउँदैनन्, स्मार्टफोनको लोभ देखाएर काम गर्न लगाइन्छ । जब बच्चा झगडा गर्छन्, स्मार्टफोन दिएर फकाइन्छ । जब बच्चा चकचक गर्न थाल्छन्, स्मार्टफोन दिएर थमथमाइन्छ ।
यसरी बच्चाको लागि सबैभन्दा लोभलाग्दो खेलौना भएको छ, स्मार्टफोन ।
स्मार्टफोन पाएपछि बच्चाहरु दंग पर्छन् । त्यहाँ युट्युबमा भिडियो हेर्छन्, गेम खेल्छन् । पूर्व किशोरवयमा पुगेकाहरु फेसबुक, टिकटकमा समेत रमाउँछन् । हत्केलाभरको स्मार्टफोन पाएपछि बालबच्चाले आफ्नो संसार भुल्छन्, आफैलाई भुल्छन् । उनीहरुले भोक लागेको भेउ पाउँदैनन्, दिसा पिसाब आएको पत्तो पाउँदैनन्, आफ्नो वरीपरी के भइरहेको छ थाहापत्तो पाउँदैनन् । स्क्रिनमा एकोहोरिन्छन् ।
तर, यस किसिमको प्रवृत्ति कति घातक छ ? अभिभावकले ख्याल नगरेका हुनसक्छन् । बच्चालाई स्मार्टफोन दिएपछि फकाइफुल्याइ गर्न त सहज हुन्छ, तर यसले बच्चाको शारीरिक एवं मानसिक विकासमा नराम्रो ठेस पुर्याउछ ।
सामान्यतः एकै ठाउँ घण्टौंसम्म बसिरहँदा बच्चाको शारीरिक गतिविधि कम हुन्छ । उनीहरुको शारीरिक विकासमा अवरोध पुग्छ । सामाजिक जीवन पनि उत्तिकै ध्वस्त हुन्छ । किनभने उनीहरु आफन्त, परिवार, साथीभाईसँग घुलमिल गर्दैनन्, अन्र्तक्रिया गर्दैनन् ।
यसबाट अर्को क्षति उनीहरुको बौद्धिक विकासमा हुन्छ । स्मार्टफोनले बच्चामा पार्ने असरका बारेमा विभिन्न अध्ययन भएका छन् । ति अध्ययनहरुको निचोडले देखाउँछ, ‘स्मार्टफोनले बच्चाको वौद्धिक क्षमता कमजोर बनाउँछ ।’
यसको असर उनको जीवनभर रहन सक्छ । उनीहरुमा केही मानसिक विकार पनि पैदा हुने जोखिम रहन्छ । एक अध्ययन अनुसार दिनमा दुई घण्टा बढी स्क्रिनमा समय बिताउने बच्चाको वौदिक विकास राम्ररी हुन पाउँदैन । उनीहरुको तर्क क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान कम हुन्छ ।
कुनैपनि समस्याको समाधान गर्ने गुण पनि विकास हुन पाउँदैन । स्मार्टफोनमा तल्लिन रहने बच्चाहरु एकोहोरो, जिद्दी, रिसाह भएको पाइएको छ । उनीहरु कुनैपनि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न असमर्थ हुन्छन् ।
युनिस केनेडी श्राइवर नेशनल इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ एन्ड ह्युमन डेभलोपमेन्ट लगायतका संस्थाहरुले गरेको अध्ययनले सो कुरा बाहिर ल्याएको हो ।
३० बर्ष काटेकाहरुलाई विष समान हुन्छ यस्तो खानपान, तपाई पनि थाहा पाउनुहोस
यी ७ खराब व्यवहारले घटाउछ तपाईको स्मरण शक्ति
यी हुन् दाँत स्वास्थ्य सम्बन्धी केही गलत धारणा, यस्ता छन् सफा गर्ने सही तरिका
खाना खाएपछि तुरुन्तै किन निद्रा लाग्छ ? थाहाँ पाइरख्नुहोस् कारण यस्तो छ
अत्याधिक गर्मीमा पिउनुस् डिटोक्स वाटर, जसले शरीरलाई गर्छ फाइदै फाइदा
सपनामा मृतकलाई देख्नु वा नग्न हुनुको अर्थ के ? निद्राको कहानीमा लुकेका हुन्छन् यस्ता अर्थ
वैज्ञानिकले गरे अचम्म लाग्ने अनुसन्धान, पहिलो पटक मानिसको रगतमा देखियो प्लास्टिक, के भन्छन् विज्ञ ?
विल स्मिथकी पत्नी जेडालाई छ यस्तो बिमारी, कतै तपाईलाई पनि छ कि ?